Goatemala: Mpampianatra vazimba sy mpanakanto nalaina an-keriny ary novonoina ho faty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2010 20:29 GMT
Mitombo ny savorovoro-na herisetra any amin'ireo vondrom-piaraha-monina maro samihafa any ambanivohitr'i Goatemala. Tamin'ity indray mitoraka ity, mpampianatra manana ny maha-izy azy, mpitarika am-panahy, mpandihy ary mpanakanto ao amin'ny Sololá i Lisandro Guarcax no niharany .
Nisy naka an-keriny i Lisandro tany an-dalana ho any an-tsekoly iray any ambanivohitra izay ampianariny , any Chuacruz, Sololá. Hita teny amin'ny vata mangatsiakany ireo dian'ny fampijaliana natao azy araka ny tatitry ny mpiasa nanamarina ao amin'ny Ivotoerana ara-koltoraly Sotz´il Jay [es], toerana izay niasan'i Lisandro amin'ny maha-tale azy . Nitatitra mikasika ny loza ihany koa ny bilaogy Colectivo El Papel [es], Red Maya (Tambazotra Mayan ) [es], ComunicArte [es], The Pavarotti Center [es]ary ny Quahutemallan [es]. Misaona ny fampijaliana sy ny famonoan-ko faty natao an'i Lisandro ireo mpanakanto sy ireo vondrom-bazimba .
Manolotra fanaovam-beloma sy tononkalo [es] ho an'ny namany sy mpitarika azy ny poeta vazimba Rosa Chávez
ao amin'ny bilaoginy , Santa Tirana:
Misaotra anao noho ireo teninao feno fahendrena, ny fitiavanao namana, ny fanoronao lalana, ny herinao, miaraka aminay foana ireo nofinofinao; ato am-poko ireo fahatsiarovana ny fotoana niarahantsika toy ireo voa , tena sarotra ny manaiky ity fahafatesana mampalahelo avy amin'ny fikorontanan-tsaina sy ny devoly ity, miteraka hatezerana sy mahakivy ahy, ny fijaliana izay manerana ny rako, ho an'ny ràntsika, fa koa ny hazavana avy amin'ny fanahinao, izay fo mitepo avy amin'ny rivotra, ny feo tsy mety lefy, kintana, zavona, ritsoky ny fotoana …
Amin'ny maha Talen'ny Ivotoerana ara-koltoraly Sotz´il Jay azy, niasa tany Sololá i Lisandro niaraka tamin'ny tambazotram-bazimba tanora Kaqchikel, manavotra iny dihin'ny hispanika taloha sy ny fomba amam-panao am-bava , araka ny hita eto amin’ ity horonan-tsary ity .
Mpikamba ao amin'ny Ivotoerana ara-koltoraly Sotz´il Jay manatsara ny dihy vazimba . Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Grupo Sotz'il Jay nampiasaina teo amin'ny fahazoan-dalana Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic License.
Fotoana tsara ho an'ireo tanora any amin'ireo faritra tena faran'izay mahantra sy ratsy, ireo toerana misokatra ho amin'ny zava-kanto sy fanehoan-kevitra, toy ny ivotoerana ara-koltoraly izay notantanin'i Lisandro mba hamoronan'izy ireo indray ny mombamomba azy ireo ary hanome aina vaovao ny maha-izy azy ireo manokana sy ny vondrona misy azy ireo. Toy ny vahaolana mahagaga no fiasan'izany mba hamefena ny tanora tsy hiditra amin'ny vondrona mpigafy ary ireo mpandrongony. Nefa araka ny asehon'ity loza ity, toa tsy voasakana mihitsy ny savorovoro arahina herisetra ity ka mamono ny vahaolana mahagaga noho ny famonoany ireo mpanakanto .